Hantaaqada Loo geystay Hantidii Ummada-Hargeisa Women’s club Dugsigii Dhaqaalaha Haweenka Xaaji Haweeya Cabdi Mooge(IHUN) | ToggaHerer
← Xalka Lagu Furdaamin Karo Doorasho Somaliland Ka Dhacda March 2019
Wasiirka Maaliyadu Wuxu Kala Irdheeyay Madaxweyne Muse Bixi Cabdi iyo Jaamac Ismaaciil Cige oo loo garan ogyahay Jamac Shabeel, Yuuse U Adeegsaday ? →
Hantaaqada Loo geystay Hantidii Ummada-Hargeisa Women’s club Dugsigii Dhaqaalaha Haweenka Xaaji Haweeya Cabdi Mooge(IHUN)
Bishii Noofember 13dii, 2017kii ayaa dalka Soomaaliland waxaa ka dhacdey doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xugeenka. Waa dhaqan ay doorasho kasta oo aduunka ka dhacdaa leedahayee xanaf iyo inay isku maandhaafaan xisbiyada natiijadii doorashada ayaa timid. Hase yeeshee dacwad loo gudbiyey maxkamada ma dhicin, sidaa darteed ayey maxkamada qaranku go’aamisay in musharaxiintii Xisbiga Kulmiye ku guulesyteen doorashadaa. Sidaa darteed waxaa dalka Soomaaliland loo caleemo saarey Mudanayaasha Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil “Saylici “ inay siday u kala horeyaan u kala noqdaan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen.
Bishii sebtember 1dii,2018kii ayaa la qabtey xafladii soo bandhigida barnaamijka ururinta xogta qaranka. Waxaa ka so qayb galay madaxweyne Muuse Biixi oo ku amaaney wasaaradaa inay soo bandhigto inay ururinayaan xogta hantida qaranka iyadoo tamarteedu ay aad u yar tahay shaqaale ahaan, dhaqaale ahaan iyo qalab ahaanba, hase yeeshee dal kasta oo hurumay dad baa u kaca oo tabaruc sameeya si ay jiilka danbe uga faa’iidaystaan uguna aayaan sida dalalka la majiirto ee ay ka mid yihiin Maraykanka, Shiinaha iyo Itoobiyadaa jaarkeena ah. wuxuu Madaxweyne Muuse ku bilaabey khudbadiisii: “ Aad baan ugu mahadnaqayaa wasaarada inay soo qabanqaabisay barnaamijkan lagu diiwaan galinayo hantida qaranka”.
Isagoo madaxeyne Muuse Biixi sii wata hadalka ayuu yidhi: “ Qof kasta oo guri dhisanayaa wuxuu u samaystaa mulkiyad,dee inaga waxaa iangu waajiba inaan mulkiyad u samayno hantidii qaranka.Waayo aragnimadu axay ina tustay in loo haysto wixii dawladu waa bilaash”.
“Dadku laba arimood oon is waafaqsaneyn ayey naga doonayaan wax noo nidaami oo wax noo qurxi iyo buurtaa anigaa leh oo amar qaadan, wanaagna wuu naga doonayaa, qaabkii wax loo wanaajinayeyna wuu diidayaa, ama waxaabu la soo istaagayaa dawladu way ku cadaadineysaa”
Bulshada reer Soomaaliland oo aad u soo dhaweysay qorshahaas ayaa markiiba waxaa maankooga ku soo maaxey boogtii dambweysay. Waxaa markaliya bulshadu ku wada dhawaaqdey dugsigii dhaqaalaha ee Xaaji Haweeya iyo ardeydii wax ka baraneysay ayaa Illaahay u soo diray gargaar. Waxaa wali maankooga ku soo maaxaya weedhihii uu markii la dumiyey dugsigaa uu ku dhaaaqey mid ka mid ah macalimiinta dugsigaasi oo yidhi: “ Hooyo wax la barey waa qaran wax la barey. Axaan filayaa xukuumada waxaa u hadhey inay masjid Jaamaca Hargeysa iibiyaanee ee kaalaya oo iibiya”.
Dadka xilligii la unkay ama sidii lagu bilaabey ogaa dugsigaa waxaa ka mid ah Eng. Maxamed Xaashi Cilmi. Mar uu ka falcelinayey weedhii uu ka jeediyey madaxweyne Muuse Biixi madashii lagu soo bandhigayey qorshaha ururinta xogta hantida guud ayuu yidhi Eng. Maxamed Xaashi ““Hantidan Umadda ee la yidhi hala diiwaangaliyo waa Shay loo baahan yahay, kolkaa Dawaan-galinta illaa waxa kujiraysa Xaruntii Women’s Clubka ee la dumiyay ayaa ku jiraysa waxyaabaha aan ka filayno in lasoo Celiyo”.
Sida la wada ogsoon yahay Dugsiga Xaaji Haweeya wuxuu jaar wadaag wanaagsan la lahaa guriga uu lahaan jiray Cali Jirde (IHUN). Waxaaney ku wada joogeen nabad iyo caano, hase yeeshee iminka dugsigaasi inta la burburiyey ayaa lagu daray oo wakhtigan uu barxad gaadiidka la dhigto looga dhigay Huteelka Aamina Weris ee Jirde Hotel. Tani axay huteelka summad uga dhigaysaa inuu yahay “Huteelka Booli Qaran”. Waxaa kaloomurugo iyo ciil leh in ardeydii dugsigaasi oo xilligaasi 2015kii ku dhaweyd 2000 (laba kun) oo ardey la kala direy ilaa iminka ay ku maqan in dugsigii la dayac tirayo.Waxaana go’aankaa soo jeediyey oo xilligaa ahaa wasiirka waxbarshada Faarax Cilmi Geedoole oo haystay amarka xukuumadii Siilaayo. Ummadaasaa la leeyahay horumar ha gaadho!!!